ख्रीष्टको अभिलेखालयबाट — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
ख्रीष्टको ख्रीष्टको ख्रीष्टको ख्रीष्टको ख्रीष्टको ख्रीष्टको ख्रीष्टको ख्रीष्टको ख्रीष्टको ख्रीष्टको ख्रीष्टको ख्रीष्टको ख्रीष्टको ख्रीष्टको
हरेक अब र फेरि म तिनीहरू मसीही बन्न चाहनुहुन्छ भन्छन् जो कसैले कुरा छौँ, तर तिनीहरूले समय एकदम सही छैन सोच्न जस्तो. जब म उनलाई किन सोध्न, तिनीहरूले मलाई आफ्नो पापको सबै बताउन, आफ्नो कमीकमजोरी सबै, र सबै भद्रगोल अप कुराहरू तिनीहरूले विगतमा गरेका छौँ. म आफ्नो पाप बारेमा तिनीहरूलाई तर्क कहिल्यै, तर म आफ्नो अनुमानको पछाडि धकेल्नु के.
तिनीहरूले पाप तरिका ख्रीष्टको आउँदै तपाईं disqualifies भनेर अनुमान लाउनुको हुनुहुन्छ, जब सही विपरीत साँचो छ. पापी हुँदा ख्रीष्ट हामीलाई राख्न गर्दैन; यसलाई हामी उहाँलाई आवश्यक कारण छ. हामी सधैंभरि प्रतीक्षा गरिने उहाँलाई अँगाल्न सिद्ध हेर्न सम्म हामी प्रतीक्षा भने.
मेरो मनपर्ने उद्धरण मध्ये, चार्ल्स Spurgeon हामीलाई देख रोक्न आग्रह, येशूलाई देख सुरु गर्न. उस्ले भन्यो:
"द! तपाईं भन्न, 'म पर्याप्त पश्चात्ताप छैन।' त्यो आफैलाई देख छ. 'म पर्याप्त विश्वास छैन।' त्यो आफैलाई देख छ. 'म पनि अयोग्य छु।' आफैलाई देख छ त्यो. 'म पत्ता लगाउन सक्दैन,'अर्को भन्छन्, 'म कुनै पनि धार्मिकता छ कि।' यो एकदम सही तपाईं कुनै पनि धार्मिकता छैन भन्न छ; तर यो कुनै पनि हेर्न एकदम गलत छ. यसलाई…